Xaalada Kismaayo oo saaka Degen & Ciidamada Jubaland oo Howlgalo wada – SBC
Xaalada Kismaayo oo saaka Degen & Ciidamada Jubaland oo Howlgalo wada
Xaalada Magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose ayaa saaka laga dareemayaa degenaansho ka dib dagaalo xoogan oo labadii maalin ee ugu dambeeyay ka dhacay magaaladaas.
Sida ay ku soo waramayaan wariye yaasha SBC International ee ku sugan magaaladaas, xaalada magaalada aya adegen, mana jiraan dagaal Hub la isku adeegsanayo oo ka jira, marka laga reebo howlgalo ay ciidamada Maamulka Jubaland halkaasi ka wadaan.
Howlgaladaasi ayaa la xaqiijinayaa in ay saaka qaadeen ciidanka Amaanka Maamulka Jubaland iyagoo ku qaaday deegaano duleedka ka xiga magaalada halkaas oo ay shalay u baxsadeen maleeshiyaadkii la dagaalamay.
Wariyaha SBC ee Jubaland Suleeqo Maxamuud ayaa soo sheegeysa in ku dhowaad 30 nin oo ka tirsanaa Maleeshiyaadkii shalay la dagaalamay ciidamada Axmed Madoobe gacanta lagu soo dhigay islamarkaana xabsiga loo taxaabay.
Sikastaba ha ahaatee magaalada Kismaayo waxaa ka jira dareen dagaaladii ka dhacya magaalada ay ku reebee, waxaa xaniban goobaha ganacsi, xaafadaha qaar waxaa kala xiray ciidanka Amaanka Jubaland si ay u xaqiijiyaan amaanka, waxaana muuqaneysa in si tartiib tartiib ah dadku uu soo bax baxayaan dhaq dhaqaaqyadoodii kala duwanaana u soo celinayaan.